Mormii qabxii qormaataa Hindii barattoota 23 galaafate - BBC News Afaan Oromoo
Mormii qabxii qormaataa Hindii barattoota 23 galaafate
Goodayyaa suuraa Shamarree ganna 18 Zotaa Venelaa jedhamtu summii dhugdee of ajjeeste
Erga Ebla darbee Hindii keessatti qabxiin qormaata kan seensa Yuunivarsitii gadi dhiifamee as dargaggoonni 23 du'aniiru.
Rakkoon kun kan dhalate Kibba biyyattii Kutaa Biyyaa Telangaanaa keessatti yoo ta'u, dogoggorri qormaata soroorsuu irratti mudate lubbuu barattootaa galaafachuu maatiin ni dubbatu.
Barattoota akkuma qabxii isaanii dhagahaniin of ajjeesan keessaa tokko kan taate Zotaa Venelaa guyyuma qabxii ishee dhageesse sana summii nyaattee, yeroo muraasa booda hospitaalatti duute.
Obboleessi Vannela akka BBCtti himetti hanga hafuura ishee dhumaa baafattutti kufuun isheedhaaf akka hin mallee fi qorumsa sirriitti akka hojjette ofitti amanamummaan dubbachaa turte jedheera.
Goodayyaa suuraa Vennela fi obboleessi ishee Venkatesh baay'ee walitti dhiyaatu ture
Obboleessi akkas jedha: ''Irra deddeebitee, akkamittan kufa jechaa turte. Haadhashee yaadachaa turte. Qormaanni irra deebiin ni ilaalama ykn waggaa dhufu irra deebitee qoramta jennee gorsinus isheen garuu darbuun qaba jechuun itti cichitee dubbachaa turte.''
Vennelan barattoota Telangana 320,000 kanneen qorumsatti kufan keessaa tokko.
Indiyaa keessatti barnoonni sadarkaa olaanaa dorgommii cimaan kan itti baay'atuudha.
Yuuniversitii seenuuf ammoo qabxiin asitti argatan murteessaadha.
Egeree ifaa fi bareedaa ta'e harka galfachuuf qorumsi barnoota sadarkaa qophaa'inaa hedduu murteessaadha.
Qabxiin qormaataa gadi dhiifamee guyyaa itti aanu keessatti barattoonnii fi maatiin barattootaa miira aariitiin guutaman hiriira ba'uun qormaanni akka irra deebiin soroorfamuu qabu gaafatan.
Namoonni hiriira ba'an kunneen qabxiin barattootaa dogoggoraan soroorfamee akkas ta'e jedhanii komatan.
Goodayyaa suuraa Venugopal Reddy waa'ee ilma isaa dhiphachuu dubbata
''Ilmi koo kutaa 11ffaatti qormaata gosa barnootaa herregaa , fiiziksii fi keemistirii guutuu deebisaa ture. Qabxiin amma ba'e garuu herrega tokko akka deebise, fiiziksii ammoo zeeroo akka argatetti kaa'a. Kun akkamiin ta'uu danda'a?'' jedha Venugopal Reddy.
"Barnoota biroofillee dorgomaa ture. Qorumsa dorgommii kan biraafis qo'achaa ture. Erga qabxii dhagahee garuu abdii kutate. Qo'achuus nyaachuus ni dhaabe. Manaa ba'uu dide. Waa'een fayyummaa sammuu isaa baay'ee na dhipphisa.'' jedhe itti dabaluun.
Hiriirri mormii bakka hedduutti akkuma babal'achaa deemeen, barattoonni of ajjeesuun iddoo garaagaraa irraa dhagahamuu eegale.
Gareen mirga daa'immaniif falmuuf dhaabbate mana murtii biyyattiitti himannaa dhiyeesse.
Manni murtiis qorumsi barattoota kufanii irra deebiidhaan akka soroorfamu ajaje.
Ergasii qabxii ji'a tokko booda Caamsaa 28 ba'een barattoonni kufanii turan 1,137 darbuun isaanii labsame.
Kanneen keessaa barataan marsaa jalqabaarratti zeeroo argatee ture, erga qormaati isaa irra deebiidhaan soroorfamee marsaa lammaffaarratti 99 fide.
Qabxii barattootaa waliin dhahuudhaan jireenya barattootaa kan balleesse jedhamee komatame dhaabbata mosaajii (software) dhuunfaa, Globarena Technology, jedhamuudha.
Dhaabbati kun bara 2017 qormaata barattoota 970,000 soroorsuuf mootummaa waliin kontiraata mallatteessee hojjechaa jira.
Dhaabbatichi qabxii barattootaa soroorsee, waldorgomsiisee qabxii darbiinsaa isa dhumaa baasee barattootaaf qooda.
Boordiin barnootaa mootummaa Indiyaa garuu barattoonni lubbuu isaanii galaafachuun dogoggora teekinikaa dhaabbati ,Globarena, uumeen wal hin qabatu jedheera.
Dhaabbati Globarena garuu dogoggorri teekinikaa mudatee akka ture dhugaa ba'eera.
"Ajaja boordii barnootaatiin hojjechaa turre. Dogoggorri teekinikaa tasa mudateera. Dogoggora gara jalqabaarratti nu mudate sirreessineerra.'' jechuun Hoogganaan dhaabbatichaa VSN Raju, Eebla darbe BBCtti himanii turan.
Goodayyaa suuraa Anamikan miseensa Humna Waraanaa Biyyaalessaa Indiyaa ta'uu feeti turte
Maatiin barattuu of ajjeestee, Anamika Yadav, Boordii Barnootaa fi dhaabbata Globarena yakka ajjeechaatiin himachuuf akka jedhan dubbatan.
Shamarreen umurii waggaa 16 Anamika Yadav qabxii qorumsaa erga argitee of ajjeesuu ishee kan dubbatan maatiin Caamsaa darbe qabxii irra deebiin ba'een darbuunshee mirkanaa'us boodarra ammas irra deebiin soroorsanii kufuushee itti himan jedhu.
Wayita qorumsa barattootaa irra deebi'anii soroorsan ammas dogoggorri waan uumamu fakkaata.
Boordiin barnootaa akka jedhutti dhaabbati qorumsa soroorsu, Globarena, irra deebiin qorumsa barattootaa soroorsuu keessatti hin hirmaane.
Qabxiin barattoota of ajjeesan 23, irra deebiin hin ilaalamne.
Maatiin garuu qorumsa ijoollee isaanii kana maal akka godhan bitaa itti galeera.
Deebiin Boordii Barnootaa fi hojiin dhaabata Globarena hedduu kan isaan mufachiise maatiin barattoota kunneenii qaamoleen kunneen itti yaadanii jireenya barattootaatti taphachaa jiru jechuun himata akka irratti banan dubbataniiru.
Goodayyaa suuraa Barjaa qabxii olaanaa barattoota Indiyaa agarsiisu
Hawaasa Indiyaa hojii wal-qunnamtii saalaa aadeffate